Ny Valosoa-Antsiranana, 19 Aogositra 2017. Hotel Diego sy Rajao, Fanokafana ny Jobily… | Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris
← Antsiranana-Ramena, 19 Aogositra 2017. Marc Ravalomanana mivady.
Antsiranana-Jobily Fjkm, 20 Aogositra 2017. Nisokatra ny taom-pankalazàna. →
Ny Valosoa-Antsiranana, 19 Aogositra 2017. Hotel Diego sy Rajao, Fanokafana ny Jobily…
Publié le 20 août 2017 par Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris
Voafitak’ireo manodidina azy indray ny Filoha Hery R.
Lasa resabe ao Antsiranana sy manerana an’i Madagasikara, ny zavatra niseho tany an-toerana, tamin’ny nandroahan’ny miaramila mirongo basy EMMOREG ny filoha Marc Ravalomanana mivady tao amin’ny hotely nipetrahany, Grand Hotel Diego izay efa nanaovany famandrihana . Dia manontany tena ny olompirenena hoe tsy nisy resaka azo atao intsony ve eto amin’ity firenena ity fa tsy maintsy mpitandro filaminana mirongo basy foana no arantiranty rehefa misy zavatra tian’ny fanjakàna atao eto, amin’ireo olona izay heveriny fa fahavalo politikany ?
Aiza moa ny Malagasy sasany ankehitriny no tsy ho lasa manana toetra tsy mahay mifandefitra izany intsony, izay mifanohitra amin’ny soa toavina maha Malagasy hatramin’izay. Avy hatrany, misy ny sahy mamono mahafaty mihintsy rehefa misy zavatra tsy mifanaraka amin’ny sainy sy ny eritreriny. Raha azon’ireo ray amandreny teo aloha angamba ny nifoha amin’izao zava-misy eto amin’ny firenena izao dia efa nitsangana izy ireny nanambara tamin’ireo mpitondra mba ho tonga saina ka tsy hanangana fahavalo , ny hevitra re no miady fa tsy ny olona e! Raha mihevitra ny tenany ho filohan’ny Malagasy 22 tapitrisa ny filoha Hery Rajaonarimampianina dia tokony handinika sy hieritreritra ihany , ka hanova ny fomba fihetsiny amin’izao taona farany itondràny ny firenena mialohan’ny fifidianana filohampirenena amin’ny taona 2018 izao .
Tena voafitak’ireo manodidina azy ny filoha matoa manao fihetsika tsy voahevitra amin’ny filoha Marc Ravalomanana toy ireny . Amin’ny 2018 Andriamatoa filoha vao ady , fa izao, ray amandrenin’ny Malagasy ianao , ka tsy tokony ho tafiditra ao anatin’ny vela-pandrik’ireo manodidina anao, tadidio fa olona niaraka tamin-dRajoelina lehibenao taloha anie ny maro amin’ireo mpiara-miasa aminao ireo e !
Sangy mihoatra ny loha no nataon’ny fitondrana tamin-dRavalo
Nanambara ny vaovao mikasika ny zava-nisy tany Antsiranana izay nandroahana ny filoha Marc Ravalomanana filohan’ny komity faha- 50 taona ny FJKM, tao amin’ny hotel nipetrahany Grand Hotel Diego ny kestora faha- 3 ny antenimerampirenena Guy Randrianarisoa, mba ho fantatry ny Malagasy manerana ny Nosy ny mikasika izany . Nambaran’ ity farany fa sangy mihoatra ny loha sy fampiasana fahefana diso tafahotra no nataon’ny fitondràna HVM tamin’ity indray mitoraka Ity tao Antsiranana . Nipetraka tao amin’ny hotely lehibe iray Grand Hôtel Diego hatramin’ny alarobia Ravalomanana Marc, mikarakara ny fety fankalazana ny faha- 50 taonan’ny FJKM izay atao eto Antsiranana amin’ny maha filohan’ ny komity mpikarakara azy . Ny alakamisy hariva taminy 5 ora teo anefa dia nodidinin’ny OMC- EMMOREG ny hotely ary tsy navelany niditra tao intsony ny filoha Marc Ravalomanana mivady. Ny antony dia tsotra araka ny nambaran’ny mitandro filaminana , ho avy hono Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ka ilainy ny hotely , tsy mety amin’ny filoha ny fipetrahan’Andriamatoa Ravalomanana mivady ao.
Marihina hoy ny kestora Guy Rivo Randrianarisoa fa efa taminy 26 jolay no natao ny famandrihana ity hotely ity ary efa nipetraka tao hatry ny alarobia ny filoha Ravalomanana mivady . Manaraka izany , aoka isika vahoaka hoy Guy Rivo tsy hilaza atsanga tsy amanorana satria tsy niaina taty Antsiranana hoy izy ka hilaza zavatra hafa mifanohitra amin’izay niseho tany an-toerana ka te hiaro ny fitondrana na te hitsetra ny filoha Ravalomanana. Tsy nipetraka na nanao famandrihana trano tany amin’ny Hotel Allamanda ny filoha Ravalomanana fa tonga dia tao amin’ny Grand Hôtel hatramin’ny nahatongavany , hitam-poko hitam-pirenena izany, na tsy tamin’ny anarany aza ny famandrihana dia hitan’ny rehetra tao izy ary fantatry ny rehetra fa aza izay no ataonareo fihatsaram-belatsihy eto hiarovantena.
Ny filoham-pirenena izany hoy Guy Rivo dia omena hasiny sy hajany raha te hipetraka tao amin’io Hotel io saingy tsy azonay ekena kosa hoy izy ny fomba hanehoana izany amin’ny fandefasana miaramila sy tsindry ambadika, aiza ilay soatoavina maha malagasy amin’izany? Tsy adala izahay hoy izy ka tsy hanome ny Filoham-pirenena ny voninahitra sahaza azy saingy tsy nisy resaka nataony taminay . Ny fihetsika ataon’ny mpiara- miasa amin’ny Filoham-pirenena ireny no manimba azy ka mila amboarina hoy ihany ny depiote Guy Rivo
Fetin’ny FJKM any Antsiranana
Mivavaka ho an’ireo mpanenjika azy hatrany Ravalo
Natomboka tamin’ny fomba ofisialy omaly tany Antsiranana ny jobily fankalazana ny faha-50 taonan’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara (FJKM), sy ny faha-200 taona nidiran’ny LMS (London Missionary Society) teto amintsika, haharitra hateloana izao fotoan-dehibe any amin’ny renivohitry ny faritra Diana izao. Filaharambe namakivaky ny tanànan’Antsiranana ary nifarana tao amin’ny Kianja Monisipaly Fandrata no nisantarana ny fotoana, tao amin’ity kianja filalaovam-baolina ity no natao ny fanompoam-pivavahana ho fanokafana izany taon-jobily ny FJKM izany. Tamin’ny lahateny nifandimbiasana no nilazan’ny filohan’ny Synodam-paritany Voalohany Antsiranana, ny hafalian’izy ireo mandray izao fety lehiben’ny FJKM izao na somary sarotra ho azy ireo ihany aza ny fandraisana ireo olona an’aliny marobe manerana ny Nosy tonga any Antsiranana.
Mampiditra ny synodam-paritany ho amin’ny tantaran’ny FJKM ny fandraisana izao lanonana izao hoy izy. Nambarany tamin’izany fa misy fiangonana FJKM miisa 360 ny Synodam-paritany Voalohany Antsiranana ary fiangonana 3 trano no misy ao an-tampon-tanànan’i Diégo. Nandray fitenenana avy eo ny filohan’ny komitin’ny jobily, ny Filoha Marc Ravalomanana, nosoritany nandritra izany fa amin’ny herintaona 2018 vao tena 50 taona ny FJKM, ary 200 taona amin’izay koa ny nidiran’ny LMS, fisantarana ny hetsika ihany izao atao izao hoy izy. Tsangambato roa lehibe no nambarany fa hapetraky ny kristiana FJKM rehetra manerana an’i Madagasikara amin’izao fankalazana roa sosona izao dia ny famitana ny trano lehibe vaovaon’ny sekoly fanofanana mpitandrina eny Ivato, izay efa mandroso tanteraka ny asa fanaovana izany, sy ny fanaovana trano iray lehibe ihany koa any Toamasina, izay toerana nahatongavan’ireo misioneran’ny LMS voalohany, ka ny volana septamba izao hoy ny filoha Marc Ravalomanana no hametrahana ny vato fototr’izany trano izany. Ankoatra izany, sahy, tsy menatra ary tsy mihatsaravelatsihy ny tena kristiana FJKM hoy i Dada, manàna fanahy mahery sy matanjaka isika noho izany hoy ihany izy.
Be ny fisedrana, tsy mampihemotra antsika izany hoy ny filohan’ny komitin’ny jobily. Tiava ny fahavalonareo ary mivavaha ho an’ny manenjika anareo, misaora ihany koa izay manozona anareo hoy ihany i Dada. Ho sakafom-pifaliana ho an’ireo olona rehetra manerana an’i Madagasikara tonga any Antsiranana dia manolotra omby miisa 25 ny filoha Marc Ravalomanana mivady. Ny filohan’ny FJKM, ny mpitandrina Irako Andriamahazosoa Ammi no nanokatra tamin’ny fomba ofisialy izao taon-jobily izao omaly, nankasitraka ny rehetra tonga any Diégo izy, ary nidera manokana ireo olona 4 mirahalahy nandeha bisikileta niainga avy aty Antananarivo hatrany amin’ny renivohitry ny faritra Diana, nankasitarahany koa ireo avy amin’ny Synodam-paritan’i Bemaraha, izay voatafiky ny dahalo teny an-dalana nefa tonga soa aman-tsara any an-toerana koa, toy izany ireo STK niharan-doza fa mbola tonga miatrika izao fetin-jobily izao koa. Ny filaharambe namakivaky ny tanàna natao omaly hoy ny filohan’ny FJKM dia midika fa vavolombelon’i Jesoa Kristy izay rehetra nanatanteraka izany. Mijoroa ihany koa hoy izy ka aza menatra ny amin’i Jesoa Kristy.
Nosoritany fa teny Ambohipotsy taloha ny sekoly teolojika ary nafindra eny Ivato amin’izao fotoana. Nanentana ny rehetra koa izy hividy ny fitaovana iombonana izay nataon’ny komity toy ny: tee-shirt, ny satroka,… Fitsangatsanganana any Ramena no hataon’ny rehetra anio, fotoam-pivavahana lehibe kosa rahampitso alahady, haraharan’ny sakafom-pifaliana lehibe ho an’ny rehetra tsy ankanavaka.
Voaporofo fa tsy mahavita azy ny fitondrana ankehitriny
Miha- mivoaka avokoa ny porofo rehetra ankehitriny fa tsy mahavita azy ny fitondram-panjaka misy. Saika amin’ny sehatra rehetra dia ahitana lesoka avokoa amin’izao fotoana ary tsy ahitan’ny mpitondra vahaolana maharitra izany. Mikasika ny tsy fandriampahalemana mantsy dia nanaitra indray hoy i Pr Harimalala Joseph ny antso nataon’ny Praiminisitra amin’ny hanomezana andraikitra ny tanora manoloana izany tsy fandriampahalemana izany. Porofo iray amin’ny tsy fahavitan’ny mpitondra ny andraikiny mantsy ny fanilihana izany indray amin’ny tanora. Raha ny tetibola dia ny mpitandro filaminana no manana be dia be indrindra, kanefa dia ho ankinina amin’ny tanora indray hono ny fitandroana fahalemana.
Mampametra-panontaniana araka izany ny antony mbola ilàna mpitandro filaminana izay efa andoavan’ny vahoaka vola amin’ny alalan’ny hetra kanefa dia mbola ny vahoaka indray no hanankinana ny fiarovana ny ainy sy ny fananany. Midika izany fa ny mpitandro filaminana dia atao hiaro ny sezan’ny mpitondra fotsiny ve fa tsy ny vahoaka sy ny fananany araka ny lazain’izy ireo ? Ny zava-misy ankehitriny anefa dia sarotra ny miady amin’ny asan-jiolahy sy ny dahalo ka mahagaga ny hanankinana izany amin’ny tanora, izay tsy manana fitaovam-piadiana akory, sa ny tanjona dia hamotehana ireo tanora mihitsy ? Raha ny fandinihan’ity mpandinika ity dia famonoana ny tanora malagasy no tanjon’ny Praiminisitra sy ny senateran’i Fianarantsoa nanao iny fanambarany iny fa homena andraikitra ny tanora amin’ny tsy fandriampahalemana ka alefa ho vonoin’ny jiolahy sy ny dahalo izany izy ireo. Fa ny zavatra nanaitra ny saina dia ny nambaran’ny filoham-pirenena tao amin’ny Onjam-peom-panjakana ka nilazany fa tompon’andraikitra amin’izay rehetra ataony ny tsirairay, izay toa milaza fa tsy misy hidirany ve ny fanapahan-kevitra noraisin’ny Praiminisitra sy ny Loholona avy tany Fianarantsoa momba izay fanomezana andraikitra ny tanora izay ka na hisy faty olona mikararana aza eto izany dia tsy andraikiny ve ? Araka izany dia tsy vaha olana iny fa hevitra taingina toy ny efa nitranga tamin’ny fametrahana ireny Kartie Mobila ireny rehefa tsy vitan’ny fanjakana ny fandriampahalemana teny amin’ny fokontany.
Ho ahy manokana hoy ity mpandinika ity dia ny vahaolana maharitra ho an’i Madagasikara dia ny fampiharana ny tenin’i Jesosy Kristy araka ny nosoratan’i Jaona 13 :34 manao hoe : « Didy vaovao no homeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo ; eny, aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa ». Araka izany dia io no fototry ny filaminana eto Madagasikara ka na iza na iza no hitady izany fampihavanana sy fandriampahalemana izany ka tsy hampihàtra io tenin’Andriamanitra io, dia zava-poana izany ary fandrebirebena saim-bahoaka fotsiny ihany, satria dia mbola ny fitiavan-tena sy fitiavam-bola ary ny fieboeboana no manjaka amin’ny mpitondra ka tsy hisy fiadanana sy hafaliana izany eto amin’ity nosin-tsika ity. Ankoatra izany raha tsy mbola vonona ny hifona sy hibebaka amin’Andriamanitra ihany koa ny mpitondra sy ny vahoaka amin’ny fahotana vitantsika, araka ny ambaran’ny tenin’Andriamanitra ao amin’ny Ohabolana 28 : 13 manao hoe : « Izay manafina ny fahotany tsy hambinina ; fa izay mitsotra ka mahafoy azy no hahazo famindram-po », dia tsy hisy ny fiadanana sy filaminana eto amin-tsika. Fehiny dia mbola averiko ihany hoy ity mpandinika ity, ny fiangaviana anareo 5 mianaka efa nitantana ny firenena mba hamela amin’izay ny resaka valifaty politika an-kolaka sy ny fifankahalana, indrindra amin’izao mialoha ny fifidianana izao mba tsy hidirana amin’ny fahapotehan’ny firenena indray ka ny hamaranako azy dia ny ambaran’ny tenin’Andriamanitra ao amin’ny Levitikosy 19 : 16 sy 18 manao hoe : « Aza mandehandeha manaratsy ny firenenao ; aza mitsangana handatsaka ny ràn’ny namanao ; Izaho no Jehovah. Aza mamaly ratsy na manao lolom-po amin’izay iray firenena aminao ; fa tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Izaho no jehovah ».
Tokony hifanaraka ny ho kandidà rehetra fa hanaiky ny voka-pifidianana
Maneho ny heviny momba ny fifidianana filohampirenena amin’ny taona 2018 indray ny CRAM na ny Cercle de Réflexion pour l’Avenir de Madagascar. Mahatalanjona hoy ny fanambaran’izy ireo ity resaka lisi-pifidianana ity. Hiandrasana manam-pahaizana avy any ivelany indray afaka volana vitsivitsy. Raha tena manana tanjona amin’ny fifandimbiasam-pahefana tsy misy korontana sy valy faty politika isika dia tokony manao fifanarahana ny kandidà rehetra fa hanaiky ny voka-pifidianana ao anatin’ny fanajana ny Lalàm-pifidianana vaovao. Jerena hoy izy ireo ny vaha olana maharitra amin’ny lisi-pifidianana.
Ny CRAM dia tsy sasatra milaza fa: “Fidian’ny Fokonolona ny Filoham-pokontany sy ny lefiny ary ireo mpikambana ao amin’ny Vaomiera valo handrafitra ny Antenimieram-pokonolona. Raha ny eo anivon’ny Vaomieran’ny fanisam-bahoaka sy mponina ary ny fanomanana ny fifidianana dia mahazo fiofanana avy amin’ny Minisiteran’ny Ati-tany ireo olona ireo. Mitovy ny “logiciel” hampiasaina amin’ny fanisana ny mponina manerana an’i Madagasikara. Fantatra mialoha ny isan’ny mpifidy isaky ny dimy taona satria izay olom-pirenena feno taona ka mahazo kara-panondrom-pirenena dia tafiditra avy hatrany ao anatin’ny lisi-pifidianana isam-pokontany ary voasoratra anarana amin’ny Ivon-toeram-piofanana eo anivon’ny Distrika amin’ny fanompoam-pirenena ivelan’ny tafika (revolisiona maitso sy revolisiona ekolojika). Tsy mila famatsiam-bola an-tapitrisany “dolara” avy any amin’ny Banque Mondiale” izany hoy ny fanambarana. Raha tsara tantana ny firenena dia tsy olana mihitsy ny mametraka ao anatin’ny teti-bolam-panjakana ny fampitaovana “ordianateurs “isam-pokontany. Io rafitra vaovao io ilay antsoina hoe: ”e-gouvernance”. Ny fanorenana ifotony ny firenena dia midika ny fampandraisan’ny Fokonolona andraikitra amin’ny lafiny rehetra mihitsy. Marihina fa efa voafaritra ao anatin’ny Lalàm-pifidianana vaovao ny daty sy ny volana hanaovana ireo fifidianana eto amin’ny firenena isaky ny dimy taona. Lasa “carte d’identité nationale biométique” no entina mifidy izay hasolo ny “kara-pifidianana” izay miteraka olana hatrany isaky ny fifidianana satria tsy voazara na nalatsaka ny anaran’ny mponina tsy mitovy hevitra na antoko politika amin’ireo Filoham-pokontany notendren’ny mpitondra. Mitombo ny taha-pahavitrian’ny mpifidy satria foana ny hala-bato amin’ny endriny samihafa. Ka raha ny voka-pifidianana tamin’ny 2013 dia hanao ahoana ny voka-pifidianana amin’ny manaraka raha handray anjara ireo tena tompon-toerana dia Andriamatoa isany Andry Nirina Rajoelina sy Andriamatoa Marc Ravalomanana? Raha misy ny kandidà vaovao tia tanindrazana hirotsaka, mety hirona amin’izany ve ireo maro an’isa tsy nifidy? Hoy ihany ny fametraham-panontanian’ny CRAM.
Galerie | Cet article, publié dans Non classé, est tagué Antsiranana Jobily, Cram Elections, Grand Hotel Diego, HVM, Jobily Fjkm, Marc Ravalomanana, Ny Valosoa 19 Aout 2017, Rajaonarimampianina. Ajoutez ce permalien à vos favoris.